နှစ်သစ်ကူး ဆုမွန်လွှာကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
« # ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင်
# ဒေါသထွက်နေသော ဌက်များ / Angry Birds »
# နှစ်သစ်ကူး ဆုမွန်လွှာPublished April 17, 2012 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in အမှာ သတင်းစကား	8 comments on “# နှစ်သစ်ကူး ဆုမွန်လွှာ”	sadabawa on April 17, 2012 at 11:08 am said:
ကျေးဇူးပါပဲ ဆရာ …
ဦးထေရိန်ဒ on April 17, 2012 at 4:26 pm said:
ဒကာုကီရေ ဂဏန်းဗေဒင်ရှိတယ်ဆိုတာုကားဖူးပါတယ် တွက်ပုံတွက်နည်း ကတော့ မမြင်ဖူးဘူးပါ ကိုယ်မွေးဂဏန်းနဲ့ ဘယ်လဂဏန်း ဘယ်ရက်ဂဏန်းနဲ့ ကောင်းကျိုးဆိုးဖြစ်တွေ ဖေါ်ပြတဲ့
နည်းမရှိသေးဘူးလား သိချင်တယ် ကျေးဇူးပြုပြီး ရှာဖွေပေးပါ
ရွှေလီမြို့ ဟောင်း အနောက်ကျောင်းက ဦးထေရိန်ဒပါ
ခင် on April 18, 2012 at 12:24 am said:
ဆရာနဲ့ မိသားစုကျန်းမာချမ်းသာပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်ဆရာ
Nilar on April 18, 2012 at 7:52 am said:
ငြိမ်း on April 19, 2012 at 2:23 pm said:
ဆရာနဲ့တကွ ၇ရက်သားသမီးအပေါင်းဘေးရန်ကြောင့်ကြကင်းပါစေ။ ကိုယ်ရောစိတ်ပါကျန်းမာကြပါစေ။
Nay Nwe on April 20, 2012 at 9:31 pm said:
ကျေးဇူးပါ ဆရာ …
saw on April 22, 2012 at 10:00 am said:
မင်္ဂလာ နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ ဆရာ
ခိုင် on May 6, 2012 at 2:49 am said:
ဆရာ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖျာ ကျန်းမာ ချမ်းသာပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ် ဆရာ….
ကျမတို့မိသားစုထဲမှာ ပြိသ၁ နဲ့ ဗြိစ္ဆာ ၂ယောက်ပါလို့…. ဆရာရဲ့ ၂၀၁၂ အတွက် မေးခွန်း တခွန်းဆီမေးခွင့်ထဲမှာ ပါတဲ့…. မိသားစုထဲက တယောက် အပြီးတိုင် ထွက်ကိန်းရှိတယ် ဆိုတာကို ဖတ်ပြီး ရင် အတော်ပူသွားပါတယ်…. ပြည်ပမှာရောက်နေတာမို့လို့လဲ ဆရာကို ဘယ်လိုမေးရမယ် မသိလို့…. ဖြစ်နိုင်ရင် နည်းလမ်း ပြောပြပါလားနော်…. ဟူးရားဂဏန်းလဲ နှိပ်ကြည့်တာ ၇ ရပါတယ်… ဆရာဒီမှာ ဖြေဘို့ အဆင် မပြေဘူးဆိုရင်လဲ… တခုခုနည်းလမ်းလေးပြောပြပေးပါနော်…. အားကိုယ်းပါတယ်….
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (60,718)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (49,393)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (47,201)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (32,035)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (24,061)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (15,372)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (13,194)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,705)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,746)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,401)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,354)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (10,210)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (10,159)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,134)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,456)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,408)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (9,068)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,907)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,754)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,752)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,290)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,895)# မေလအတွက် (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (7,778)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,740)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,610)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,560)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,353)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (7,158)# မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၃၇၅)ခုနှစ် (၇)ရက်သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,151)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (7,055)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !